Xildhibaanad Ubax Tahliil oo boqolaal u dhashay Beesha Habargidir ku casuuntay Muqdisho kadibna telefoonkii dansatay? | Habargidir Community
Habargidir.info- Looma dhutin oo qeybaha Beesha Habargidir waxeey 9 subaxnimo ilaa 3 duhurnimo si habsami leh u wateen shirkoodii Hotel Sahafi hasse yeeshee waxeey fadeexada ugu hadal heynta badan Muqdisho noqotay Xildhibaanad Ubax Tahliil oo Casuumaad u fidisay 370 ka mida Masuuliyiinta beesha Habargidir ee ku nool Muqdisho kadibna ka dhuumatay.
Xildhibaanad Ubax Tahliil ayaa qeybaha Habargidir u qeybisay Casuumaad ay ku weydiisatay iney ka soo qeybgalaan shirweyne ay qaban qaabiyeen Xildhibaanadda iyo Wasiiradda Beesha Habargidir kaas oo ka dhacaayay Hotel Sahafi laakiin markii xubnahii beesha Hoolka buux dhaafiyeen waxaa leeys weeydiiyay oo la waayay Xildhibaanadii iyo Wasiiradii beesha Habargidir.iyadoo la sugaayay 9 subaxnimo iyo 3 galabnimo.
Odayaashii Beesha Habargidir ayaa wacay Xildhibaanad Ubax Tahliil hasse yeeshee telefoonkeeda hawada ayuu ku maqnaa.
Dadkii shirweynaha ka qeybgalayay qaarkood waxeey ku dhawaaqayeen Ubax Dawaco maaha qofka la mooday oo laaluush ayey xalay qaadatay.
Waxaa la sheegay in lacag loo qeeybiyay Xildhibaanadii Beesha Habargidir lagana codsaday ineysan shirweynaha beesha tegin.
Ergadii lagu casuumay Shirweynaha ayaa ugu dambeyn iska bixiyay lacagtii Hotel Sahafi ee qadada.
Fashilinta shirka beelweynta Habargidir wuxuu Xasan Garguurte u adeegsaday Mahad Salaad,Cabdi Kariim Xuseen Guuleed iyo Xildhibaan Ugaas Dhageey oo lagu tilmaamo calooshiis u shaqeeyste u nugul laaluushka ,una sacbiya qof walba oo shilin siiya.
Wasiiru Dowlaha Madaxtooyadda Mahad Salaad ayaa shirka Habargidir goor dambe tegay ,wuxuuna markiiba bilaabay inuu afduubo isagoo diiday in Warbaahinta duubto boqolaalka qof ee iskuugu tegay shirka iyo khudbadahii ay jeedinayeen.
Mahad Salaad wuxuu hadalkiisa ku koobay “Anigaa Madaxweynaha u tegaa,anigaa ka sii deeynaa Saraakiisha Habargidir ee la xiray,guryaha la burburshay iyo tacadiyadda ay ku kacayaan Masuuliyiinta u dhashay beesha Abgaal Cismaan”
Cabdi Qeybdiid oo madasha ka hadlay wuxuu yiri “Qofka Raxanweyn ama Dir laga xiro waxaa lagu sii daayaa wax ka yar 48 saac hasse yeeshee Wiilashii iyo Gabdhahii Habargidir waxeey Xabsiyada ku jiraan halsano ilaa lix bilood”
Odayaashii,Ganacsatadii iyo dhalinyaradii ka qeybgalay Shirweynaha ayaa ku ballamay in Xildhibaanadda Habargidir iyo Wasiiradda lagala laabto kalsoonida,waxaana lagu ballansan yahay shirweyne labaad oo si madax banaan loogu kulmo.
Sikastaba ha ahaatee,dadku waxeey leeyihiin Ubax Tahliil waxeey dhiteeysatay cuqubo iyo Habaar,waxaana hubaala ineysan ka bad baadi doonin Isha iyo Habaarka Odaayaashii Beesha Habargidir ee ay Hotel-ka uga dhuumatay.